Akụkọ - Gwa Manitowoc na ụlọ ọrụ ọhaneze ụwa ma kwuo maka ọdịnihu ọnụ!
Shuangzhu okporo ụzọ, South Ganghua Road, Jingang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Atụmatụ zuru ụwa ọnụ
N'ụtụtụ nke Septemba 3, Maazị Lei Wang, onye isi oche ndị isi nke Manitowoc Tower Machinery Business Emerging Markets na Onye isi ala nke mpaghara China, a kpọrọ ndị otu ya ka ha gaa leta Grace.
Ndị otu abụọ ahụ nwere mmekọrịta miri emi na ịnụ ọkụ n'obi na nrụpụta na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu, njikwa mma, nkwalite ngwaahịa na mmepe mmepe.
Dịka onye ndu na ụlọ ọrụ klọọkụ ụwa, Maazị Wang nyere nkọwa zuru ezu maka usoro mmepe ngwa ngwa Manitowoc. Afọ atọ gara aga, ụlọ ọrụ kreenu ụlọ elu China ka na-arịgo elu. N'okpuru ọnọdụ siri ike dị otú ahụ na n'okpuru nkwado nke ụdị ndị China na-arị elu, ọ bụghị ọrụ dị mfe iji weta ụdị mba ụwa na-enweghị olileanya n'ụzọ ziri ezi.
Maka Manitowoc, mgbanwe ndị dị na afọ atọ gara aga adịghị mfe. Maazị Wang, bụ onye dị mma n'ịchọ ohere na ọnọdụ ndị na-emegide ya, na-agbasi mbọ ike ime mgbanwe. Dabere na ụlọ ọrụ Manitowoc dị mkpa nke ụwa-ụlọ ọrụ Zhangjiagang, ọ na-eduzi amamihe ya na-aga nke ọma n'oge gara aga, gụnyere ọrụ dị nro metụtara ndị ọrụ niile, yana mkpa ndị ahịa. E mepụtara ngwa ngwa imepụta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ na Manitowoc ngwa ngwa, ma jikọtara ya na mpaghara Asia-Pacific na ahịa ndị China. Afọ atọ gara aga arụpụtawo ihe ndị dị ịrịba ama.
Mmejuputa iwu, itinye uche na nkowa na ihe gbasatara ala nye ndi oru nile, obughi soso mee ka ndi oru were nweta ezigbo ume, kamakwa ha gbaliri ibanye na uchu. Akpakọtara ntakịrị ahụmịhe na kristalization nke amamihe nke ndị ọrụ, gbakwunyere nkọwa ndị ọzọ gbasara usoro nrụpụta, usoro mmepụta, ngwa ọrụ yana ngwa ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na akpaghị aka na ụlọ ọrụ Zhangjiagang. Omume ahụ siri ike nke etinyere na ụlọ ọrụ Zhangjiagang n'afọ ndị na-adịbeghị anya enyerela Manitowoc Potain aka inweta uru site na ụlọ ọrụ ahụ. Ogo njikwa, mmepụta arụmọrụ, mmepụta kwa unit ebe, na n'ichepụta akwụ ụgwọ e mma mma.
Gbaso mmụọ omenkà nke "ịbụ onye kachasị mma", Grace na-aga n'ihu na-amụta site na uru nke ụlọ ọrụ klaasị ụwa, mmụba na-aga n'ihu, na-enye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị elu ma rụọ ọrụ nke ọma bụ ụzọ doro anya maka Grace iji meziwanye. "Tinye ọtụtụ narị osimiri n'ime ụlọ ọrụ n'oké osimiri, buru ụzọ chee echiche ma merie ọdịnihu.”
Post oge: Sep-04-2020
Na-elekwasị anya na plastic extrusion na imegharị ihe maka iji ngwa n'ichepụta ihe, GRACE bụ akụrụngwa soplaya tụnyere imewe, R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ.